लोडसेडिङ हटाउने कुलमानका यी सात सूत्र - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘उपलब्ध स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न सके लोडसेडिङ हटाउन सम्भव छ’
राजु स्याङ्तान काठमाडौं, १० मंसिर
जलस्रोतमा धनी भएपनि जलविद्युतको कम उत्पादन र सही सदुपयोगको अभावमा अधिकांश समय देश बिजुलीविहीन हुन्थ्यो। कुनबेला बत्ती जान्छ पत्तै हुँदैनथ्यो। काम गर्दागर्दै वा मेसिन चल्दाचल्दै जब बत्ती झ्याप्प जान्थ्यो, तब लेखपढ गरिरहेका विद्यार्थी, काम गरिरहेका मानिस हठात् रोकिन्थे र सरकारका नाममा केही अभद्र गाली दिन्थे।
पश्चिममा बाढी बनेर बस्ती बगाएको खबर सुनिथ्यो। पूर्वमा कोशी आँगनमा पसेको समाचार पढिन्थ्यो। तर, देशैभरि सदा लोडसेडिङको लोडसेडिङ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सूचना जारी गर्थ्यो- पानीको बहाव कम भएकाले आजबाट लोडसेडिङ १६ घन्टा।’
तर तिहारदेखि यता भने राजधानी काठमाडौंमा लोडसेडिङ भएन, जुन धेरैलाई आश्चर्यजस्तो लाग्यो। विद्युतको अव्यवस्थित वितरणका कारण लोडसेडिङ भएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापन–नेतृत्वमा उपत्यकासहित देशका कतिपय स्थानमा लोडसेडिङ हट्यो। जादुगरीझैँ अचानकै लोडसेडिङ हट्नु धेरैका लागि सुखद् आश्चर्य भएको छ।
यो लोडसेडिङ कसरी अन्त्य भयो र देशैभरि लोडसेडिङ कम गर्ने वा अन्त्य गर्ने कुलमान–सुत्र के हुन्? कसरी हट्छ लोडसेडिङ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यस्ता सात सूत्र छन्। पढौँ उनकै शब्दमाः
१.नीतिको कुशल कार्यान्वयन गरौँ
हामीले लोडसेडिङको समस्या भोग्नु नीति निमार्णको होइन, कुशल कार्यान्वयनको समस्या हो। बनेका नीतिहरू कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख समस्या हो। ती कार्यान्वयन किन भएनन् भन्ने कारणहरु त छन् नै।
२. राजनीतिक स्थिरतामा ध्यान दिऊँ
योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनुमा देशको अस्थिर राजनीतिक परिपाटी जिम्मेवार छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र सरकारसँगै नेतृत्व र व्यवस्थापक परिवर्तन हुने भएकाले सही ढंगले काम हुन पाएको छैन। तर, राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्रै दोषारोपण गरेर पन्छिन मिल्दैन। म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ।
३. आफ्नो कर्तव्यबोध गरौँ
यो काम मेरो भन्ने कर्तव्यबोधको भावना मनमा भयो भने जुनसुकै काम सफल हुन्छ। अपनत्व महसुस गरेर काममा दत्तचित्त भई लाग्नुपर्छ। म अहिले बिहान सात बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म किन कार्यालयकै काममा यहाँ बस्छु? मेरो कार्यालय–अवधि त १०–५ सम्म मात्रै हो नि! तर जिम्मेवारीबोध भनेको आफ्नो काम कार्यक्षेत्रभित्रको दायित्वमा दत्तचित्त भएर लाग्नु हो।
४. उपलब्ध स्रोतको सही व्यवस्थापन गरौँ
आपुर्तिभन्दा माग बढी हुनु लोडसेडिङको मुख्य कारण हो तर उपलब्ध स्रोतलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सके लोडसेडिङ हट्छ। स्रोतसाधन पर्याप्त भएपनि वितरण, सञ्चालन सही ढंगले नगर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ। आपूर्ति व्यवस्थापन सही ढंगले भएन भने लोडसेडिङ भइहाल्छ। तसर्थ पावर हाउसहरूलाई राम्रो अवस्थामा राखेर कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ
५. भौतिक पूर्वाधार सबल बनाऔं
विद्युत प्रवाह हुनुसक्ने भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो हुनुपर्छ। हामीसँग आम ग्राहकसम्म विद्युत पुग्न आवश्यक पूर्वाधारहरू कमजोर छ। विद्युत ग्राहकसम्म पुग्न प्रसारण लाइन, सवस्टेसन, डिष्ट्रिव्युसन ट्रान्सफर्मर सम्पूर्ण चुस्त हुनु पर्यो। पर्याप्त विद्युत भएपनि ट्रान्सफर्मर, सवस्टेसन सानो क्षमताको भए लोडसेडिङ हुन्छ। १० मेघावाटको लोड छ। ५ मेघावाट ट्रान्सफर्मर छ। त्यस्तो ठाउँमा लोडसेडिङ भइहाल्छ। यसको समाधान गर्नुपर्छ।
६. प्राविधिक कुशलतासहित काम गरौँ
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न कुशल सञ्चालनको आवश्यकता पर्छ। संचालन राम्रो भएन भने पनि लोडसेडिङ हुन्छ। हरेक घन्टा ‘लोड चेन्ज’ हुन्छ। कताबाट कता सप्लाइ गर्ने, उता बढ्यो भन्नासाथ उता सप्लाइ गर्नु पर्छ।, यता घट्यो भन्ना साथ उताबाट सप्लाइ गर्नुपर्छ। फ्रिक्युन्सी मिलाउनुपर्छ। लोड बढेको र घटेको मिलाउन सकिएन भने सिस्टमनै कोल्याप्स हुन्छ। प्राविधिक रूपमा कुशलतापूर्वक मिलाउन सके लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ।
७. ‘पिक आवर’मा सन्तुलित वितरण गरौं
विद्युतको खपत दिनभरि एउटै हुँदैन। ‘पिक आवर’ छुट्याएर विद्युतको सन्तुलित वितरण गर्नुपर्छ। विद्युत खपत समान ढंगले हुँदैन। बेलुकी एकदमै बढी खपत हुन्छ। राति हुँदैन। त्यो मागलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके लोडसेडिङ न्युनीकरण गर्न सकिन्छ। ‘पिक आवर’मा उद्योग कलकारखाना नचलाउन सूचित गरिएको हो। अहिले आधाभन्दा धेरै विद्युत खपत रोकिएको छ। ‘पिक आवर’मा उद्योग कलकारखाना चलाउन दिए अहिले पनि दैनिक २० घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ।
प्रकाशित १० मंसिर २०७३, शुक्रबार | 2016-11-25 14:02:05